Toerana dimy tena manintona hitsangatsangana irery sy hankafizanao ny traikefa | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | | General, mpitarika, Tsangatsangana
Mahafinaritra be ny dia miaraka amin'ny fianakaviana na namana. Fa ny fanaovana azy irery koa dia. Ankoatry ny fahalalana toerana mahafinaritra sy olona miavaka dia manampy izany fantaro bebe kokoa ny tenanao ary, amin'ny dia sasany, handalinana ny ara-panahin'ny tena manokana. Noho ireo antony rehetra ireo dia hanolotra toeran-kaleha dimy izahay maneran-tany izay azonao atao ny mankafy irery.
Ny tanàna any Amerika Avaratra dia mendrika hotsidihina farafaharatsiny indray mandeha amin'ny fiainanao. Izy io dia mandrafitra firazanana sy firazanana tena izy izay mampifanaraka azy amin'ny kolontsaina sy mahafinaritra. Ankoatr'izay dia misy ifandraisany betsaka amin'izany. Afaka mandehandeha mamaky an'i Central Park ianao, miakatra ny fanjakana Empire, mitsidika ny Statue of Liberty na mandeha mamaky ny West Village na Times Square. Ary aza adino ny mihinana ny iray amin'ireo alik'izy ireo mafana eny an-dalambe.
Na izany aza, misy safidy tsy dia malaza loatra noho ireo voalaza. Ohatra, avy amin'ny Tampon'ny VatolampyEo an-tampon'ny Rockefeller Center dia manana fomba fijery miavaka momba ny tanàna toa ny avy amin'ny Fanjakana Empire ianao. Afaka miala sasatra ihany koa ianao Valan-javaboary Bryant, any Manhattan, faritra iray ahafahanao mividy saika ny zavatra tadiavinao eny an-tsena Chelsea na ilay any Gotham Andrefana.
Ny Grand Palace
Raha tianao ny kaontinanta hafa, ny renivohitr'i Thailand dia toerana mety indrindra handehanana irery. Hahafantatra kolontsaina hafa tanteraka amin'ny anao ianao ary hahita fomba amam-panao izay mety tsy noeritreretinao akory. Aza adino ny mitsidika ireo tranom-pivavahany maro. Ohatra, eo akaikin'ny Grand Palace, mendrika ny ho hitanao samirery, manana ilay malaza ianao tempolin'ny buddha emeraoda ary somary lavitra ny Wat arun na Tempolin'ny Zoma.
Saingy tsy maintsy mahita ny tsenan'ny tanàna feno olona sy vokatra ihany koa ianao. Ilay iray an'ny Chatuchak, manana toerana mihoatra ny valo arivo; Damnoen Park, izay mitsingevana, ary Mae Klong, izay vao mainka hahagaga anao satria eo an-tampon'ny làlan'ny lalamby miasa io. Rehefa tonga ny lamasinina iray dia nidina ilay izy ary, rehefa nandalo izy dia namboarina indray. Farany, mitsangantsangana amin'ny ony Chao Phraya amin'ny sambo sy ireo fantsona mivoaka avy ao.
Na dia tanàna mora vidy ho an'ny Tandrefana aza izy ity, raha te handany vola kely aza ianao dia manoro hevitra anao izahay handany ny alina any amin'ny faritry ny Khao san road. Toerana feno trano fandraisam-bahiny mora vidy, bara tsy misy farany ary ahitanao mpandeha manirery toa anao.
The Bar angano angano
Ny renivohitry ny Repoblikan'i Irlandy no sehatra ahitana ireo maherifo amin'ny 'Ulysses' avy amin'i Joyce ary manana karisma manokana. Ao amin'ny Dame Street no Lapan'i Dublin, izay azo tsidihina. Ary, eo anilany, aza mitsahatra ny mahita ny Katedraly St. Patrick. Ary koa ny tranombakoka toa ny National Archaeology na Modern Art.
Raha tianao ihany koa ny zava-miafina, azonao atao ny mitsangatsangana amin'ny alàlan'ny angano eto an-tanàna, toerana toa ny lapa, Efatra efa-polo na ny tanàna Viking taloha any Wood Quay. Toy izany koa, ity lalana ity dia tsy tsy ampy fitsidihana ny trano fisotroana tranainy indrindra any Dublin.
Ary, raha mitady hetsika mandritra ny alina ianao dia mifindra manodidina ny manodidina ny Temple Bar, izay ny ankamaroan'ny Pubs Irlandy mahazatra ary feno mpizahatany.
Na dia toerana fitsangantsanganana vaovao aza ny renivohitr'i Islandy, azo antoka fa dia fitsangatsanganana ity. Ity tanàna kely misy mponina telo alina sy iray hetsy ity dia manana zavatra betsaka hatolotra anao. Ao amin'ny distrikan'i Miöborg no ahitanao ny tranon'ny Parlemanta sy ny fipetrahan'ny governemanta. Ary tena akaikin'ny Tranomboky, ny Teatra nasionaly ary ny katedraly taloha. Io no antsoina hoe toy izao mba hanavahana azy amin'ny Fiangonana Hallgrímskirkja na katedraly maoderina, tranobe iray izay mendrika jerena ihany koa noho ny hatsarany sy ny fahasahian-tenany manorina.
Etsy ankilany, amin'ny sisiny ivelany, atsinanana, ho hitanao ny Tranombakok'i Arbaer Folk, izay ahafahanao mianatra momba ny fahazarana sy fomba amam-panao nentim-paharazana an'ny Islandy. Ao amin'ny tanàna manodidina ny tanàna dia misy faritra maro handinihana ny Jiro Avaratra, seho tokana eto amin'izao tontolo izao. Na izany aza, tsy maintsy manandrana ianao rehefa mazava ny alina.
Ary farany, raha te hanana sary mihetsika ianao dia maro ny bara ao an-tanàna manolotra seho. Amin'ny sasany dia misy kaonseritra jazz ary amin'ny fampisehoana hatsikana hafa na hetsika dihy. Etsy ankilany, raha ny amin'ny gastronomia mahazatra dia tsara kokoa ny tsy manandrana azy. Tena mihenjana izy ary tsy mifanentana amin'ny tsiron'ny Mediteraneana. Raha miresaka momba ny antsantsa masirasira na loha loha masaka amin'ny ron-kena akoho ianao dia afaka mahazo hevitra momba ny tianay holazaina. Aleo ianao manana alika mafana amin'ireo izay tompoin'izy ireo Baejarins bestu, miorina akaikin'ny seranana.
Iray amin'ireo lakandrano any Amsterdam
Ny renivohitry ny Netherlands koa dia toerana tsara halehanao hivezivezy irery. Manome toky anao izahay fa tsy ho leo ianao satria be dia be ny zavatra hita ary vao mainka aza toerana tokony hifalifaliana.
Hanombohana, ny satroka manan-tantaraNiorina tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo dia iray amin'ireo lehibe indrindra eran'i Eropa izy io. Ary, manodidina azy, misy fantsona maro azo zahana, noho izany dia fantatra amin'ny anarana hoe tanàna "Ny Venise any avaratra". Isan'andro dia misy sambo manome anao fitsidihana azy ireo. Manoro hevitra anao izahay hanararaotra ny iray amin'ireo fitsangatsanganana an-dranomasina alina.
Fa ny iray amin'ireo fitsidihana tsy azo ihodivirana ao Amsterdam dia ny Museum an'i Van Gogh. Ary, ho famenony, ny an'ny -pirenena mozea, izay misy sanganasa marobe nataon'i Rembrandt, Vermeer na Hals. Tokony ho hitanao koa ny Royal Palace, ny tsena voninkazo manaitra, ny Distrika jiro mena aiza ny Fiangonana taloha sy ny Vondelpark.
Mikasika ny fialam-boly, aza hadino ny manana kafe amin'ny iray amin'ireo malaza kafe avy amin'ny tanàna. Ary, hihinana na hisakafo tsakitsaky, mankanesa any amin'ny Leidseplein, iray amin'ireo be atao indrindra ao Amsterdam. Etsy ankilany, raha te hividy boky faharoa ianao, dia mijanona eo Kianja Spui, izay misy tsena iray manontolo ho azy ireo.
Fehiny: ireto no Toeran-kaleha lehibe dimy hivezivezena irery. Mbola misy maro hafa, fa azonao antoka fa tsy handiso fanantenana anao ireo noresahinay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Toeran-kaleha dimy hitetezana irery